TimeFlies Izithombe Zokumboza Umagazini - Umagazini Design
Izithombe Zokumboza Umagazini
Izithombe Zokumboza Umagazini Umqondo oyinhloko kwakuwukuphuma ngaphandle kwenqwaba yamamagazini amaklayenti endabuko. Okokuqala, ngezembozo ezingejwayelekile. Isembozo esingaphezulu somagazini i-TimeFlies se-Nordica sezindiza sibonisa ukwakheka kwesimanje kwe-Estonia, kanti isihloko somagazini esisesembozweni sikamagazini ngamunye sibhalwe ngesandla ngumlobi womsebenzi ofakiwe. Idizayini yesimanje kanye ne-minimalistic yomagazini ihlanganisa ukudluliswa kwamagama ngaphandle kokunye ukwakhiwa kwamagama okwezindiza ezintsha, ukuheha isimo sase-Estonia nempumelelo yabaqambi abasebasha base-Estonia.
Igama lephrojekthi : TimeFlies, Igama labaklami : Sergei Didyk, Igama leklayenti : Nordica.
Izithombe Zokumboza Umagazini Sergei Didyk TimeFlies